Taariikhda My Butros » Shan talo oo ku saabsan sida loo wajaho Date A Blind
Dating noqon kartaa waayo-aragnimo ay ku niyad jebinaysaa. Shukaansi Blind bixi waxaad ka bixi kartaa meel mugdi ah oo ku saabsan waayo-aragnimo ay ku niyad jebinaysaa. Laakiin ma jirto baahi loo qabo in ka baqimayno aragnimada taariikhda indha la '. Marna ma ku garanayaa kii aad la kulmi laga yaabaa.
Trusted il - Yaa dajisa taariikhda indha la 'oo aad noqon kartaa fure u ah waxyaabaha aad ka filayso. Haddii uu saaxiib nafarayseen ayaa soo jeediyay taariikhda, fikirto halkaas oo saaxiib tani laga yaabo in ay ka imanayaan. Weydii sababta ay u doonayaan in ay kor aad dhigay iyo nooca xiriir ah oo ay u maleeyaan inaad la wadaagto doonaa taariikhda. Tani waxay noqon kartaa macluumaadka asalka qiimo u leedahay in marka qof cusub kulmayaan markii ugu horeysay.
Meesha eey - meel wanaagsan ka dhigi kartaa taariikhda indha fudud. Dooro meel aan joogtada ahayn oo xiiso leh meesha aad labadiina aad u ogaataan waxa ay ka sugayaan. Meelaha eey dadka sida makhaayadaha iyo makhaayadaha waxaa wanaagsan, taariikh indha la '. Waxaa jira fursado muddo gaaban sida cabeyso wada iyo haddii wax waliba, taariikhda lagu kordhin karaa taariikh casho dheer. Sidoo kale, fursadaha xiiso leh waa weyn. Hawlaha sida golf mini ama bowling noqon kartaa iyada oo ku tiirsan mid aad u badan oo ku saabsan mid ka mid wada hadal xiiso leh iyo flirty. Ha dooran meelaha shukaansi caadiga ah sida tiyaatarka filimada sida aad aan heli doonaa fursad uu ku barto wax ku saabsan midba midka kale.
Dharka ku haboon - Mudanayaal dooni doona inuu raadiyo iminka oo aan haysan wax walba oo ka soo bandhigaa. Wax caadi ah oo raaxo leh oo si fiican u labisan. Ragga dooni doona inuu raadiyo caadi ah laakiin weli iminka. Ha u qalad ah xidhashada wax ma tihid raaxo leh in sida ku arki doono iyada oo loo marayo in aad niyadda taariikhda sameeyo
Faqa kalsooni – Naftaada iyo bandhigo sida ugu fiican ee wax kuu gaar ah. Laakiin ha iloowin in aad weydiiso su'aalo badan oo ku saabsan taariikhda, xiiseynayaan in ay nolol iyo abuuro qaar ka mid ah xidhiidhada wanaagsan. Haddii aad kala kulmay datemypet.com, tusin ugu fiican ee aad saaxiib xayawaanka sida dan laga yaabaa in aad leedahay. Wax ka iftiimi danahaaga iyo hiwaayadaha iyo ka tago wada hadal kasta oo taariikhda xiriirka albaabka ku soo.
Hayso aragti wanaagsan - Hubi in aad is dhoola qaadan taariikhda indha la '. Noqo ku faraxsanahay in aad hesho fursad ay ku kulmaan qof cusub oo iska tag la socodka. Furaha isagoo taariikh weyn waa inuu ahaado farxad iyo laygi, sidaa noqon naftaada iyo raaxaysan taariikhda indha la '.